I-Parma Parco Ducale
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguNico
Indawo isembindini wedolophu kufuphi: iPalazzo Ducale, indawo yokuhlala endala kaMaria Luigia, iPalazzo Pilotta (imyuziyam kunye ne-teatro Farnese enhle), iTeatro Regio, indlu yaseToscanini. Iflethi ikufuphi nesikhululo sikaloliwe (10min ngeenyawo), kwaye ngaphezu koko kukho indawo yokupaka imoto ekufutshane kakhulu (iKennedy yokupaka) enesikhululo sokwabelana ngeebhayisekile. ikona yomlilo. Kumgangatho ophezulu kukho igumbi lokulala lesibini elinebhedi ephindwe kabini.
Indawo isembindini wedolophu kufuphi: iPalazzo Ducale yesikhumbuzo kwiParco Ducale (indawo yokuhlala endala kaMaria Luigia), iPalazzo Pilotta (imyuziyam kunye neTeatro yaseFarnese enhle), iTeatro Regio yaseGiuseppe Verdi, indlu yaseToscanini.
Iflethi ikufuphi nesikhululo sikaloliwe (10min ngeenyawo), kwaye ngaphezu koko kukho indawo yokupaka imoto ekufutshane kakhulu (iKennedy yokupaka) enesikhululo sokwabelana ngeebhayisekile.
4.90 ·Izimvo eziyi-472
4.90 out of 5 stars from 472 reviews
4.90 · Izimvo eziyi-472
Embindini wesixeko ungandwendwela iindawo ezininzi. Kufutshane kakhulu neflethi kukho iParco Ducale enesikhumbuzo sePalazzo Ducale, apho uMaria Luigia wayehlala ngokuqhelekileyo. Kufutshane nomnyango omkhulu weParco Ducale ungafumana imyuziyam yendlu kaArturo Toscanini. Ukuba uwela ibhulorho iPonte di Mezzo udibana nePalazzo della Pilotta, apho unokutyelela iTeatro Farnese.
Ukuba ufuna ulwazi okanye ezinye izikhombisi ndingakuvuyela ukukunceda. Uya kufumana kwiimephu ezisicaba kunye nolwazi lweziganeko eParma.
Ungaphinda unditsalele inombolo yomnxeba okanye nge-imeyile ukuba ufuna uncedo